Advice Advice - Qalabka ugu Qaalisan ee Korjoogteyn Online Online
Qalabaynta shabakada webka ayaa loo sameeyey si loo soo saaro macluumaadka goobaha iyo blogyada kala duwan . Waxa kale oo lagu magacaabaa barnaamijyada goosashada ee shabakada iyo qalabka feylka xogta webka. Haddii aad isku dayeyso inaad ururiso xogta ku saabsan boggaaga, waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadan soo saarida shabakada oo aad soo qaadato xog cusub ama jira oo cusub oo sahlan.
Import - setting up a small computer network.io
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee laga soo saaro shabakadda. Import.io wuxuu bixiyaa dhismaha oo wuxuu sameeyaa dataset adigoo soo dejiya macluumaadka bogaga gaarka ah ee macluumaadka iyo u gudbinta xogta CSVs. Waa sahlan tahay in boqolaal kumanaan oo internetka ah iyo blogs ku xoqaan iyagoo isticmaalaya barnaamijkan. Import.io waxay isticmaashaa tiknoolajiyada ugu fiican si ay ula socdaan xog badan oo maalinle ah, taas oo ay u baahan yihiin ganacsiyada badankood iyo kuwa waaweyn. Barnaamijkani wuxuu ku yimaadaa mid bilaash ah oo lacag ah, waxaana lagu rakibi karaa Mac, Linux iyo Windows si fudud.
Waa aalad kale oo cajiib ah oo cajiib ah oo laga soo saaro shabakad. Webhose.io wuxuu na siiyaa si sahlan oo loo helli karo xogta dhabta ah, qaabaysan, oo si fiican loo qaabeeyey. Ka dibna wuxuu xogta ku xareeyaa internetka oo wuxuu taageeraa in ka badan 200 luuqadood, kaydinta xogta qaabab kala duwan sida RSS, JSON, iyo XML..Aan halkan kuu sheegno in Webhose.io uu yahay codsiyada ku saleysan shabakada oo isticmaala macluumaadka gaarka ah markaad careysaneyso ama soo saareyso boggaga internetka.
CloudScrape wuxuu bixiyaa taageerooyin dad badan oo isticmaala oo ururiya macluumaadka nooc kasta oo goobta ah ama blog. Uma baahnid wax download; waxa loola jeedaa inaad haysatid oo kaliya inaad bixiso qaybteeda lacagta caymiska iyo barnaamijka ayaa laguu soo diri doonaa adiga oo isticmaalaya email ahaan. Waxaad si dhaqso leh u kaydin kartaa xogtaada la ururiyey ee qalabka kaydinta daruuraha ama adeegahaaga gaarka ah. Barnaamijkan wuxuu taageertaa Google Drive iyo Box.net labadaba waxaana loo dhoofiyaa JSON iyo CSV.
Scrapinghub waxaa ugu wanaagsan in la ogaado qaybaha bilaashka ah iyo lacagta caymiska. Barnaamijka buuggan shabakada ah waa daruuro ku saleysan waxayna caawisaa boqollaal kun oo bog internet ah maalin kasta. Qaar ka mid ah xulashooyinka ugu caansan waa Crawlera, Cabbiraadaha Barta Counter-ka, iyo Qalabaynta Guriga. Scrapinghub waxay u rogi kartaa boggagaaga oo dhan inay noqdaan kuwo si wanaagsan loo abaabulay waxayna u kaydiyaan si toos ah isticmaalka offline. Qorshaha lacagta caymiska ayaa kuugu kacaya $ 30 bishii.
VisualScraper ayaa weli ah barnaamij kale oo cajiib ah oo laga soo saaro shabakad kaas oo loo isticmaalo in lagu ururiyo macluumaadka boqolaal kun oo goobood. Barnaamijkani wuxuu caawiyaa ka-qaadista iyo raadinta bogagga shabakadaha gudaheeda. Waxaad isticmaali kartaa ama ku daabici kartaa boggaga noocyo kala duwan sida JSON, SQL, iyo XML. Waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-saaxiibtinimo, iyo qorshaha lacagta caymiska ah ayaa ku kacaya qiyaastii $ 50 bishiiba iyadoo la adeegsanayo in ka badan 100k boggag tayo sare leh.